musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Hugo Lloris Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhodhi Stopper inonyatsozivikanwa neNickname; "Saint Lloris". Yedu Hugo Lloris Childhood Indaba Nhoroondo ye Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye zvisingatauri pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvechinangwa chake chekudzikisa mano asi vashomanana vanoona Hugo Lloris Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Hugo Lloris Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Hugo Lloris akaberekwa musi we 26th raDecember 1986 (zuva rebhokisi) mune imwe nzvimbo uye nzvimbo yezuva, iri muMediterranean yeMediterranean, kuFrance. Akaberekwa kuna amai vake, Marie Lloris (gweta) uye baba, Luc Lloris (mubhengi). Vabereki vake vakapfuma kwazvo.
Paakaberekwa, akatumidzwa zita rake "Hugo" nokuti vabereki vake vakanga vachiyemura zvikuru nyika yeFrench nyika inozivikanwa munyori Victor Hugo. Kubva kubva kuvabereki vane pfuma yakawanda, Hugo haana kumbofanotaurwa kuti ave muchengeti wemugove, kunyanya kwete nemhuri yake.
Hugo Lloris akakurira mumutambo wemubereki wake waaida, tennis apo iye, semhuri yese yakatangwa kumutambo uye yakanyanyisa pairi.
Akatamba mutambo uyu kusvikira panguva ye13 uye akanga ari mumwe wevatambi vepamusoro muzera rake, akatevedzwa mumutambo wechidiki wechiFrance.
Hugo Lloris Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Career in Summary
Yakave yakaitika, yakanyorwa pamusoro penyeredzi ... ndiani angataura? Hugo akatanga kutamba nebhokisi nevana vake tennis kuti auraye nguva asati asvika tennis yake yezuva nezuva. Pakutanga, akatanga semuviri wekutanga asati aedza nzvimbo yemuchengeti wegadziri kuti avhare nekuda kwevanokuvadza vavariro.
Zvinotyisa, Hugo akanga akanaka kwazvo panzvimbo yevashandi iyo munhu aishanda pachikwata, akabvunza munun'una wake, mutambi webhola muCimiez kuti auye uye atarisa kune asingazivikanwi uye akapiwa muchengeti wechikwata.
Apo CEDAC (Centre de diffusion et d'action culturelle) yakakumbira mutana wemakore matanhatu kuti abatane nechikwata, Hugo akafara, asi vabereki vake havana kugamuchira. Mushure mekunge vanyatsogutsikana, vakabvumirana mumamiriro ezvinhu. Kuti mwana wavo anofanira kuchengetedza zvidzidzo zvake zvetennis uye ave mudzidzi akanaka kuchikoro zvisinei pasina bhora. Hugo zvakadaro pane imwe nguva munguva yakawira mukuda nebhola. Akave akaoma sevabereki vake. Nemafaro, aive neshamwari mumunhu wekurukuru vake, mutambi wemupira wepamusoro: ndiye iye, uyo aigara achiita muzukuru wake wechiduku kusvika kuchiteshi cheNix kuti aone uye achifara boka remukati.
Yakauya nguva apo rudo rwake rwekuva muchengeti wepamba rwakanga hwakadzika. Pazuva rakanaka uye rakaipa, Hugo akaudzwa kuti Gmer Dominique Baratelli wekare weFrance uye Nice aifanira kuuya kuzokushanyira. Dominique Baratelli akashamiswa pakuonekwa kwaHugo paakashanya. Mushure mekunge achimuona achitamba ari oga, akamanikidza mabhatani anodiwa uye akakurudzira Hugo kuti abatane neOGC Nice's Youth Academy. Pazera remakore gumi, Lloris akabatana neNichan's youth academy.
Hugo akapedza makore ane gumi nemana ari mumugariro wekamba yeguta racho uye zvidzidzo pamwe chete nebhola; zvakanga zvisiri nyore nokuti vabereki vake vaida kuti aende kunodzidza muchikoro chenguva dzose, kwete muChikemy chaiyo yakasarudza maawa mashoma okudzidza. Mushure mezvose, bhora rakanga riri kungofara; zvidzidzo uye yunivhesiti, iyo yaiva yemberi yevabereki vavo vekutanga! Hugo, zvisinei, aida kuzadzisa zvaaida. Akasaina chibvumirano chake chekutanga chebhizimisi pashure pokunge awana Baccalauréat (sciences uye maths).
Muna 2008, paakanga achiri kutamba ku Nice, amai vake vakafa. Mazuva maviri chete mushure mekufa kwake, akawana ruremekedzo rwenyika nokuda kwekuramba kwekufirwa kwekufirwa kunopiwa kubva kumabija Frédéric Antonetti, pane kusarudza kutamba mumutambo wenhabvu weNix. Lloris yakaita zvakanaka mumutambo pasinei nemamiriro ezvinhu.
Mushure meimwe imwe nguva yakasimba naNice, kufungidzira kwakauya kune kuti Lloris aizotamba nguva ipi inotevera. Akabatana neLyon mugore rimwechete uyo amai vake vakapfuura. Mushure mekunge kune imwe nharo yakakakavadzana naLyon, Tottenham vakatora mukana wokumuisa mu2012. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Hugo Lloris Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Hugo Lloris akabudirira kubudirira kubva mumunda, achiroora Marine akanaka. Vaviri vacho vakasangana pachikoro chesekondari apo Hugo akanga atova munzira yake yokuva muchengeti mukuru muFrance.
Vose vaviri vakaungana pamabhenchi echikoro eNice mu2002 uye vakaroora 10 makore gare gare. Vaiva nechato chavo kuSt. Francis Church de-Paule mumutambo muduku muNice. Mwanasikana wavo wokutanga, Anna-Rose, akaberekwa nguva pfupi pashure pacho. Mudiki wavo, Giuliana, akaberekerwa mu2014, nguva pfupi Lloris asati atora France muChitatu yeNyika Yenyika.
Vanasikana vose vanogona kuonekwa vachiritsigira nguva dzose Hugo mune zvimire. Kukura, mudzimai waHugo, Marine haana hanya nemutambo murume wake anoita zvepamusoro. Akataura kuti ... " sevechiri kuyaruka, (iye) akanga asingafari nebhola. "
Mazuva ano, iwe unogona kugara uchiwana Marine kune imwe nzvimbo paWhite Hart Lane panguva yeLigeria League, kana kupi zvako nzvimbo yeFrance iri kurongwa. Anowanzosangana nemamwe madzimai eFrance, uye zvikurukuru Jennifer Giroud uye Ludivine Sagna.
Pasinei nekuroorana naLloris kubvira 2012, Marine haisi yeWAG. Ane dhigirii mumutemo nemuvanhu. Iye ndiye muridzi we Manège en Sucre, kambani yezvokupfeka inogadzira zvipfeko zvepamusoro zvevana kubva pamwedzi mitatu kusvika kuCXUMUM.
Hugo Lloris Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Simba inowanzoonekwa semidziyo-ye-pfuma yemutambo. Vakatambi vakawanda vakagovera nyaya dzekurera zvakashata uye vane mutambo kuvonga nekuvaunza pfuma yakawanda. Izvi hazvisi nyaya yaHugo Lloris. Iye ndiye mwanakomana wemhuri yevagari vehurumende inofunga nezvemari kubva kubhola sehokwe. Lloris akakurira mwanakomana wemhuri yepamusoro muFrance. Amai vake vakakurumidza vaiva gweta uye baba vake vaiva bhangi. Vose vari vapfumi zvikuru.
HANZVADZI KONAMA: Gautier Lloris akaberekwa 18 July 1995 ndiye munin'ina mukoma waHugo Lloris. Iye muFrance muchengeti wemutambo anotamba kuGeélec Ajaccio pachikwereti kubva kuNix, sechikwata chekare. Pasi pane mufananidzo weGautier. Anotarisa zvakadai sehanzvadzi yake, Hugo.
Hugo Lloris Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Hugo Lloris ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Hugo Lloris Strengths: Iye ane mhosva, anorangwa, ane kuzvidzora uye mutungamiri akanaka.
Hugo Lloris Weaknesses: Anogona kunge asingakanganwire, uye achizvideredza.
Chii Hugo Lloris anoda: Anoda Mhuri, tsika, mimhanzi uye unyanzvi hwakanaka.
Chii Hugo Lloris asingadi: Zvinenge zvose pane imwe nguva.
Muchidimbu, Hugo anongoda nguva uye mutoro. Akanyanya tsika uye kazhinji akaoma zvikuru mune zvakasikwa. Iye ane chimiro chemukati chekuzvimirira chakamupa kufambira mberi kwakakura zvose muupenyu hwake hwehupenyu uye hwehutano. Haana kumbofungisisa nezvepfuma yomubereki wake, panzvimbo pekutsvaka zvaaida. Pakupedzisira, Hugo ndiye nyanzvi yekuzvidzora uye ane simba rokutungamirira nzira yeboka rake.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nokuverenga Hugo Lloris Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.